Sidee ku cadaadisaa Video Faylal ay u Email
Wax walba oo ku saabsan Compressing Video ah
Ma ahan shaqo fudud in loo cadaadin video ah in qaabab kala duwan leh qalab kala duwan. Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaagno qaar ka mid ah Hanuuniyaa ku cadaadisaa videos.
1 Video kombaresarada
1.1 Video kombaresarada
1.2 Free Video kombaresarada
2 Sidee ku cadaadisaa Video ah
2.1 Sidee ku cadaadisaa Video Files
2.2 cadaadi Videos Iyadoo Sorenson Media Tuuji 9
2.3 cadaadi Videos Iyadoo Mac Finder
2.4 cadaadi Video Iyadoo Quicktime Player Pro
3 cadaadi kala duwan qaabab Video
Fraps 3.1 badalo Video
3.2 komberesarrada MP4 Free
3.3 cadaadin files audio
3.4 cadaadi Video Wixii vimeo
3.5 Videos cadaadi FLV
3.6 cadaadi MKV
3.7 cadaadi MP4
3.8 cadaadi MOV
3.9 cadaadi wmv
3.10 cadaadi AVI
4 Ujeeddooyin ku cadaadisaa Videos
4.1 cadaadi Video for Email
4.2 cadaadi Video for YouTube
Madaxa kuu xoqo si aad u hesho barnaamij-sooc ku cadaadisaa video for email lifaaqa? Waxaad aadan keligaa. Tan iyo nidaamka email ugu kaliya u oggolaatid file kooban diraya, aadan ku jiri kara video badan oo si guul ah xitaa ka dib markii la abuurayo file zip ah waxaa loogu talagalay. Sidaas sida si ay u xaliyaan dhibaatada? Dhab ahaantii, waxaad isticmaali kartaa hawadda video ah email sida Wondershare Video Converter . Sidaa daraadeed, aad cadaadin karo file a video badan oo si karti leh in xoogaa tallaabooyin ah. Kaaftoomi No. Hoos waxaan ku sharxi doonaa sida taas loo sameeyo faahfaahsan.
Best Video hawadda u Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin videos MOV, MP4, AVI, wmv iyo in ka badan.
Awood aad si fudud u beddeli bitrate, xallinta iyo heerka jir.
Dalagyada, darsamaan, isku shaandheyn iyo kala gudahood barnaamijka.
Dhamee hawlaha qaab beddelidda in dhowr ilbiriqsi.
1. darsada video files
Guji "Add Files" badhanka si ay u helaan ilaha videos. Sidoo kale, waxaad soo jiidi kartaa jeedi files direclty in uu furmo suuqa hoose. Barnaamijkan wuxuu taageeraa compressing badan videos for email, si aad u dajiyaan karaa dhowr files wada by hoos geynayo "Ctrl" button on keyboard. Marka dhammaan faylasha soo bandhigay sida thumbnails in saxaarad shayga, waxaad qabanqaabin kartaa si faylka, beddelo magacyada file wax soo saarka, iwm
2. Dooro "Tirada yar" furmo suuqa wax soo saarka
Riix image qaab dhinaca midig ee suuqa hoose iyo doortaan qaab video ee liiska hoos-hoos sida wax soo saarka ah. Ka dib markii aad ka dooran qaab wax soo saarka ah, guji xaq u hooseysa Dejinta icon si ay u helaan suuqa kala goobta. Daaqadda muuqata, sax "Tirada yar" checkbox.
Talooyin: Haddii uu jiro qaab lahayn oo walaac kasta, in aad qaab kale oo caan ah sida FLV, M4V, MP4, iwm kuwaas oo inta badan Eebay file size yar badalo kartaa video.
Waxa kale oo aad gacanta astaysto-beegyada uu u ah heerka yara, heerka jir, xallinta, iwm furmo Settings si loo gaaro tayo kasta oo aad rabto. Marka aad dejinta beegyada uu aad u hooseeya, waxay abuuraysaa file size badan oo yar yar, laakiin sidoo kale ka hooseeya video oo tayo leh. Sidaas dhali tan maskaxda iyo isku dayaan marar badan loo gaaro waxtarka ugu fiican ee lagu salaynayo tirada file la ogolyahay.
3. bilaabanayo cadaadisaa aad video in email
Marka aad satisifed natiijada, kaliya ka dhacay Beddelaan si aad u bilowdo riixo isla markiiba. Barnaamijkan waxa aad u waxtar fiican ku riixo, oo aad ka hubin kartaa boqolkiiba oo ka hartay bar horumarka.
Marka cadaadiska waa dhameystiran, waxaad riixi kartaa "Open Folder" si aad u hesho files compresed si deg deg ah, ka dibna waxaa ku soo lifaaq in email u soo dirto si aad saaxiibo aad ugu dhaqsaha badan.
Video tutorial: Sida loo cadaadin video files u Email
Sida loo Split Audio Files
Sida loo Email Pictures sida Muqaal ah
Sida loo isticmaalo VLC inuu u ciyaaro Blu-Ray filimada?
11 Dhibaatooyinka Talooyin canabkii Video Dhibaatooyinka
Sida loo Edit Facebook Dib Video
Top 30 Educational Video Goobaha si Baro New Stuff
Beddelaan mod in MP4 si fudud oo dhaqso
The Best Free Torrent Players Available
Sida loo Beddelaan MKV in Nexus 7 siman Radidiyaha
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa Video Faylal ay u Email